Blog - The Development History of The Printer Na The Ugbu A ebi akwụkwọ Technology
The Development History nke Printer Na The ugbu a Printing Technology
Akụkọ ihe mere eme nke onye nbipute bụkwa akụkọ ihe mere eme nke teknụzụ dị elu na ụlọ ọrụ.
Kemgbe afọ ndị 1970, laser, inkjet, mbipụta mmiri na teknụzụ ndị ọzọ na-enweghị mmetụta apụtawo ma jiri nwayọọ nwayọọ tozuo. Usoro izizi ọkụ nke isi ebipụta bụ nke mbụ ejiri na faksị igwe na 1980s. Kemgbe ahụ, isi igwe obibi ọkụ malitere ịmalite ngwa ngwa.
Mgbe ihe karịrị afọ 40 nke mmepe, thermal-ebi akwụkwọ isi technology na-aghọ ndị ọzọ na ndị ọzọ tozuru okè. Tụnyere inkjet obibi akwụkwọ na laser obibi, thermal obibi, nke na-eji dị iche iche anụ ahụ na chemical ụzọ ibipụta odide, mara maka ya uru nke ngwa ngwa ọsọ, ala mkpọtụ, doro anya na-ebi akwụkwọ, na gburugburu ebe obibi-echebe. Site na uru ndị a, a malitere iji igwe obibi akwụkwọ nke ebe obibi dị iche iche na ngwa nbipute dị iche iche.
Ma dị ka electronic ọmụma, mma ogo akpaaka, mmepe nke mmanya koodu ude technology, ngwa nso nke kwes ebi na-eto eto, ugbua site n'ọfịs ọdịnala na akwụkwọ faksị ezinụlọ, ngwa ngwa na ngwa ahịa azụmaahịa, ụlọ ọrụ mmepụta ihe, njem, lọjistik, ego, tiketi lọtrị, ngalaba ọrụ ndị ọkachamara na-apụta dị ka mmepe ahụike.
OWO anọwo na-elekwasị anya na nyocha na mmepe na mmepụta nke ndị na-ebi akwụkwọ ọkụ, na ụlọ ọrụ na-ekpo ọkụ ọkụ ruo ọtụtụ afọ, nwere ihe karịrị afọ 10 nke ahụmahụ mbupụ bara ọgaranya.
Ugbu a, anyị site na WINPAL ngwa nbipute ọtụtụ ewu ụdị mara kwes ebi akwụkwọ nwere ihe uru.
WP200 80mm thermal nnata ngwa nbipute
A rụnyere mgbidi
Na akpaaka cutter ọrụ
Nkwado IAP melite na ntanetị
Kwado ọkwọ drawer ego
Na-akwado mgbanwe IP gafee ngalaba ntanetị
WP300E 4 inch thermal labeelu ngwa nbipute
Humanized mkpọchi chepụta ， mfe ọrụ
Kwado otu ＆ abụọ D-koodu mbipụta
Economic 2-anụ ọhịa mmanya-koodu ngwa nbipute
Nkwado interface Bluetooth
Obere, chekwaa ohere
WP-Q2B ngwa nbipute mobile
Nkwado NV logo ebi akwụkwọ
Na-azọpụta ike ọrụ
Na-akwado Bluetooth sọrọ mode
Akwado otutu 1D & 2D koodu obibi
Dakọtara na Windows / IOS / Android
Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmatakwu banyere OWO onye nbipute, biko rụtụ aka na ebe nrụọrụ weebụ anyị maka nghọta zuru ezu banyere usoro ngwaahịa WINPAL.
Ana m atụ anya ịhụ gị n'izu ọzọ!
80mm Kwesie Nnata Printer, Onye na-ahụ maka nnata ihe ntanye 80mm, Onye na-ebipụta ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa, Nnata Printer, Nnata Mobile Printer, Wifi Receipt Printer,